YouTube को Earnings हरु कसरी Double गर्ने ? - RabinsXP Blog
YouTube को Earnings हरु कसरी Double गर्ने ? म त्यो मान्छे लाई challenge दिन्छु जस्को मेरो भन्दा धेरै views र subscribers छन तर मेरो भन्दा काम पैसा कमौछ। Internet मा मेहेनेत त गर्नै पर्छ तर कैले काही Techniques पनि आपाउन जान्नु पर्छ। अब मेरो जास्तै तपाईं लाई रहर लगेको छ भने try गर्नुहोस् अनी मसँग आएर भन्नु होल कि मैले झुतो भने कि सांचो। किन कि वेब भनेको अहिले आफ्नो views इन्क्रेअसे गरेर लुट्न खोज्छन अनी तिनै को ads disabled हुन पुग्छ।
Verified YouTube Payment of Rs. 80,000 in Nepal that I received.
मैले २००१ अनी त्यस्पछी २००९ देखी आजसम्मा लगतर प्रयोग गर्दै आए websites हरुमा। राम्रो सँग गर्ने को राम्रै हुन्छ। अनी अहिले YouTube को ट्रेन्द चलेको छ अनी अनी हरेक बर्ष भिडियो हेर्ने मान्छे को जमात बद्दो छ, गूगल को अनुसन्धान अनुसार। अनी मैले पनि केही महिना YouTube लाई पनि पारीक्ष्यण गरे र मेरो पारीक्ष्यण पनि सफल भयो। मेरो अनुमान मा मैले एकै महिना मा ८० हजार कमौन सक्ने रहेछु मात्र जबो एउटा साधारण योउटुबे channel बाट , अनी Softwares र Websites बाहेक। म अहिले एस्तरी नै उठेको पैसा ले “Digital Nepal” campaign पनि सुरु गरी रहेको छु जहाँ मैले नेपाल मा Internet of Things(IoT) लाई वढुवा दिनकोनिम्ती धेरै web services free मा दिने गरेको छु जसमद्धे हो “Free Web Hosting in Nepal” .
र मेरो आफ्नै ब्यक्तिगत भुगै अनुसार मैले आज YouTube Channel हुने हरुलाई Partnership with Freedom Network को Special Link ल्याको छु। यो refer link मात्र न भएर special link हो । यहाँ जानुहोस् (https://www.freedom.tm/via/rabinsxp) र signup गर्नुहोस् । अनी सानो channel होस् य ठुलो सबै खालको accept हुन्छ तर धेरी सिग्नुप्स हुने भर time लाग्छ। तेसैले मेरो link बाट गर्न तपाईंल फाइद हुन्छ एदी गर्नु भएन भने हजुरको earnings मा कमी भयो भने मलाई नभन्नु होला। यहाँ जानुहोस् र तत्काल signup गर्नु पर्छ । यदी YouTube channel छैन भने channel बनाउस अनी जुन तीन तयार हुन्छ त्यो दिन यो link क्लिक गर्नुस् अनी signup गर्नु होल। यही हो लिन्क: https://www.freedom.tm/via/rabinsxp अब कुरा आउँला सबैले त्यसै भन्छन् हुने केही होइन। मैले प्राप्त गरेको details तलको picture मा छ। अचेल picture हरु altered पनि हुन साक्छन् तसैले हजुरले Freedom Network मा सिधै सम्पर्क गरेर सोध्न पनि सक्नु हुन्छ।